निकै घात लाग्दो प्रेम कहानी,जति सुकै बिजी भएपनि दुई मिनेट समय दिएर पढ्नुहोला – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/निकै घात लाग्दो प्रेम कहानी,जति सुकै बिजी भएपनि दुई मिनेट समय दिएर पढ्नुहोला
प्रेम एउटा अनुभुति हो ।जो कोही पनी प्रेममा पर्नु सोभाविक नै हो तर अन्धो प्रेम गर्नु धेरै ठुलो भूल हो ।मतलब ,केही दिन अगि गरिएको एउटा सर्भे बाट के कुरा पत्ता लाग्यो भने बढि भन्दा बढि माया प्रेम मा स्कुल कलेज को बिध्यार्थी हरू प्रभावित भएको देखिन्छ जसको माध्यम फोन र फेसबुक भएको थियो । यस बाट के पूष्टी हुन्छ भने माया प्रेम गर्ने हरू आखा चिमलीएर माया गरिरहेका छन । कसै लाइ देख्न साथ माया बस्नु ठीकै हो ।फोन मा माया आदन प्रधान गर्नु पनि ठीकै हो तर सोच बिचार न गरि माया गर्नु ठुलो भूल हो ।तपाई स्कुल कलेज पढनु हुन्छ ।
मानौ तपाई लाइ कोहि केटा या केटि मन पर्यो ।त्यस पछि प्रस्ताव फोन मा रात दिन को वार्ता लाभ ।कतै डेटिङ बस्नु हुन्छ । त्यस समय अबधि भरी तपाई लाइ impress गर्ने जो कोहि केटा या केटि सरीफ या सोजि बनीएर बसन सकेका हुन्छन । फोन मा अप्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सहज हुन्छ ।थुप्रै माया प्रेम को कुरा हुन्छन । अनि call wating भेटदा शंका गर्नु हुन्छ । माया मा शंका गर्नु सोभाविक हो तर हद भन्दा बढि गर्नु हुदैन । म तिम्रो लागि ज्यान दिन्छु भन्ने रोमीयो हरू माया को नाटक गरि तपाई लाइ मख्ख पार्न पनि सक्छन । तपाई संग भेट्दा ,फोन मा राम्रो कुरा गर्यो भनेर केटी प्रेमीका हरू मख्ख न पर्नु होस ।
हात मा चुरोट गाजा खादै अगाडि रक्सि को बोतल खादै फोन गरेको कुरा हरू देख्न सकीदैन । त्यसैले कसैलाई देख्न साथ माया गर्नु भन्दा ,फोन को कुरा मा मख्ख पर्नु भन्दा केटा को background बानी बेहोरा ,चाल चलन बुझन अती आवशयेक छ । बुझनु होस अनि प्रेम गर्नु होस । तब थाहा हुन्छ तब पछुताउनु सि बाहेक केही हुदैन । आउदो सात जन्म सम्म पनि म तपाई को हु भने प्रेम लाइ दुषित बनाउने जुलियट हरू को पनि कमी न भाको का हो र ? कलेज स्कुल मा बनीएर जाने अनि मस्कीएर बोलो भन्दै मा केटा हरू सपना देख्न थाल्छन । सुरू मा हाई हेलो त्यस पछि नम्बर साटा साट ।
कुरा बढयो । केटा ले प्रपोज गर्यो ।केटी ले love you too भने पछि केटा ले सबै कुरा बिर्सिन्छ । तर कलेज मा एउटा ,स्कुल मा एउटा ,घर मा भिन्नै ,घुम्न जादा भीन्दै boyfriend न भाको केटी भेटन धेरै मुस्कुल छ । मिठो मिठो कुरा गर्यो ,भविष्य को कुरा गर्यो भनेर केटा प्रेमी हरू कदापि मख्ख न पर्नु होस । त्यसैले प्रेम गर्नु पुर्व केटी कुन टाईप को हो ,कती को दयालु छे ,चाल चलन ,बानी बेहोर सबै कुरा जान्न जरुरी छ । ता कि पछि पछुताउनु न परोस । कसैले दुई चार बचन मिठा कुरा बोल्यो भनेर प्रेम गर्छ भनेर सम्झनु मुर्खता हो । प्रेम ले मान्छे लाइ बिगारे को पनि छ भने प्रेम ले मान्छे लाइ सपारे को पनि छ ।
एक जना लाइ प्रेम गर्नु होस ,मन देखि गर्नु होस । जुनी भरी लाइ गर्नु होस । कसै को मन दुखाएर आफु खुसी हुनू पनि जिन्दगी हो र ?? होला तपाई हरू दुबै बिच माया होला । तर जब त्यो माया एउटा बैबाहिक जिवन मा बाधिन्छ तव हरेक साचो र सत्य कुरा सुनिदै र देखिदै जान्छ । फल स्वरूप धेरै को जिन्दगि र भविष्य बरबाद हुने गर्छ । भनीन्छ नि PREVENTION IS BETTER THEN CARE । उपचार गर्नु भन्दा रोग लागन नदिनु राम्रो । यदि तपाई सच्चा प्रेम हुनू हुन्छ भने यो पोष्ट तपाई को प्रोफाईल र एउटा ग्रुप मा SHARE गर्नु होस । हेरूम कती जना सच्चा प्रेम प्रेमीका हुनू हुन्छ ।
नक्शामा सबै नेपाल देखिएको दाबी